यसरी देखिन्छ खुट्टाको औँलामा पनि कोरोनाको लक्षण — Arthatantra.com
Arthatantra.com > समाचार > यसरी देखिन्छ खुट्टाको औँलामा पनि कोरोनाको लक्षण
यसरी देखिन्छ खुट्टाको औँलामा पनि कोरोनाको लक्षण
एजेन्सी । जब ज्वरो, रुघाखोकीसँगै स्वासप्रश्वासमा अप्ठ्यारो भयो भने त्यो कोभिड १९ संक्रमणको लक्षण हुनसक्छ । यसले शरिरका विभिन्न अंगलाई असर पुर्याएको हुन्छ ।
यस संक्रमणले शरिरलाई सिथिल बनाउनुका साथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटाउँछ । र शरिरभित्र अंगहरु निस्क्रिय बन्न पुग्छन् ।केही बिरामीमा भने खुट्टाको औँला सुन्हिने समस्या देखापर्ने गरेको चिकित्सकहरुले अनुभव गरेका छन् । तर कतिपय बिरामी भने संक्रमित भएर पनि किन उनीहरमा लक्षण देखिँदैन भन्ने चाहिँ अझै अस्पष्टता छ ।
यससँगै केही अन्तर्रा्ष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित भएका लेख अनुसार छालामा पनि यसले प्रत्यक्ष असर देखाउने गरेको छ । ‘ब्रिटिश जर्नल अफ डर्मेटोलोजी’मा प्रकाशित लेखले यस्तै छालामा कोभिड १९ को असर बारे व्याख्या गरेको थियो ।
जहाँ पाँच अवस्थाका छालाको स्वरुपबारे चर्चा गरिएको थियो । यसवाहेक कतिपय अवस्थामा दुर्लभ किसिमका लक्षण समेत देखिने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
२०७७ जेष्ठ ६ गते ०७:४७ मा प्रकाशित
नेपालमा थपिए ७४ जना नयाँ संक्रमित, हालसम्म कति पुगे ?
आफुखुसी संबिधान संशोधनको प्रयास गरिए एमालेले प्रतिबाद गर्छ: नेता नेपाल
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कडाइभन्दा नियमन आवश्यक
भैरहवामा यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना, हेर्नुहोस् फोटो !
सेयर बजारमा हलचल, २०.२६ अंकले झर्यो सूचक, कारोबार पनि अर्ब नाघेन !